Akụkọ - Otu esi ahuta ihe eji eme ihe?
Ogologo nke ibu nwa bụ ihe mbụ a ga-atụle. Ọ bụrụ na ọ pere mpe, ọ gaghị ekwe omume, n'ihi na ụmụ ọhụrụ tolitere ngwa ngwa mgbe ha bụ ụmụ ọhụrụ, ọ bụrụ na eserese ahụ adaba, ị ga-amalite ịzụta obere pram. Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ị ga - achọpụta na uto nke nwa ahụ, ọ na - abụ ihe na - ekwesịghị ekwesị, ị ga - azụta nke ọhụrụ. N'ezie, nsogbu nha ahụ gụnyere nha mgbe mpịachi. Ikupu nwa ahu, i gha etinye pram na akpati. Naanị ma ọ bụrụ na nha pere mpe mgbe mpịachi, ị nwere ike iji ya Ọ dị mma.
Uzo nke pram bu kwa ihe kwesiri ichebara echiche. Mgbe ụfọdụ ị ga - ebu nwa ọhụrụ ahụ, dịka mgbe ị na - agbadata ala ma ọ bụ ebe ndị mmadụ juru, ị ga - achọpụta na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịzụta ihe ọkụ ọkụ.
3. Ime ụlọ
Offọdụ ụgbọ ibu ụmụaka nwere ike ịgbanwe ihe dị n’ime ya, dịka ịnọdụ ala ma ọ bụ ịgha ụgha. Mgbe ị dinara ala, ejiri obere obere anwụnta kpuchie ihe eji ebu nwa. Ọ bụrụ na emechara ya, enwere mbadamba nkume n'ihu nwa ahụ, nke yiri obere tebụl, ka ị nwee ike itinye karama na ihe ndị ọzọ.
A na-eme ụgbọ ụfọdụ ụmụaka ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya. Iji maa atụ, e nwere ọtụtụ ụdịdị mmadụ mere. E nwere ebe a ga-akwụnye akpa, na ebe a na-etinye ihe ndị dị mkpa nwa, dịka karama mmiri ara ehi na akwụkwọ mposi. Ọ bụrụ na e nwere ụdị atụmatụ ahụ, ọ ga-aka adịrị mfe ịpụ.
5.Wheel kwụsie ike
Mgbe ị na-ahọrọ onye na-agba ọsọ, ị kwesịrị ịlelekwa nọmba nke wiil, ihe wiilị ahụ, dayameta nke wiil ahụ, na ntụgharị ntụgharị nke ụgbọ ala ahụ, yana ma ọ dị mfe ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mfe.
Ebe ọ bụ na akpukpo aru nke nwatakịrị ahụ siri ike karị, ị ga-elerịrị anya n'elu ụgbọ ala ahụ na akụkụ dị iche iche na nkuku dị iche iche mgbe ị na-ahọrọ ụgbọ ala. Youkwesịrị ịhọrọ elu dị larịị ma dịkwa mma, enwekwala nnukwu akụkụ na ala ụgbọ ala na-adịghị edozi, iji zere imebi akpụkpọ nwa ahụ dị nro.